နောက်ဆုံးမိနစ် | RayHaber | raillynews
ပွဲလာသည့်အခါတံတားများသည်အခမဲ့လား။ အားလပ်ရက်များမှာတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများကားအခမဲ့လား။ သူမစပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ Ramadan တွင်အဝေးပြေးလမ်းမနှင့်တံတားများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 27, 07.00:XNUMX သည်အထိအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် [ပို ... ]
Eid al-Fitr အတွင်းတိုင်းပြည်တစ်လွှားညမထွက်ရအမိန့်ရှိသော်လည်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်တင်းကြပ်သောကြီးကြပ်မှုပြုလိမ့်မည်။ Ramadan ပွဲတော်အတွင်းရဲနှင့် Gendarmerie တို့မှနေ့စဉ်စုစုပေါင်းယာဉ်အစီး ၁၈,၀၀၀ ၅၆၄ ယောက်သည်ရဲ၊ [ပို ... ]
ဘယ်အချိန်မှာဗလီဖွင့်မှာလဲ ဘယ်အချိန်မှာဗလီ ၀ တ်ကျောင်းများနဲ့မက်ဂျစ်စ်တွေမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်မလဲ။
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၈၁ ထံသို့ပေးပို့သောစာနယ်ဇင်းတွင် Coronavirus အမျိုးအစားအသစ် (Covid-81) သည်တူရကီ၌ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ဘာသာရေးရေးရာညွှန်ကြားမှုမှဆောင်ရွက်သောဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းအတာအတွင်း၊ ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၆ ရက်မှစတင်သည် [ပို ... ]
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် Sanliurfa Ceylanpınarပြည်နယ်ခြံအတွင်းရှိတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော Bekir Pakdemirli သည်ယနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီး Pakdemirli [ပို ... ]
တူရကီရဲ့အပြာရောင် Bayraklı ကမ်းခြေအရေအတွက်တိုးများလာ! ကမ္ဘာပေါ်မှာ 3
တူရကီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးခြားဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအပြာရောင်အလံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုသည်ယခုနှစ်အတွင်းထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ တတိယကမ္ဘာမှာအနိုင်ရဆုံးအပြာအလံနှင့်စပိန်နှင့်ဂရိတို့ရှိသည် [ပို ... ]
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra ZümrütSelçukကအပိုဆုကြေးငွေ ၅၂ ရက်ရှိပြီးတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကာနှစ်ပိုင်းခွဲပေးသည်။ [ပို ... ]
Içiii ၀ န်ကြီးဌာန၏လုံခြုံရေး၊ Gendarmerie အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်တူရကီနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်ဖွဲ့များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်မှုငြိမ်းချမ်းရေးလျှောက်လွှာကိုမေလ ၂၁ ရက်၊ လက်တွေ့တွင်, Ramadan [ပို ... ]
YHT လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ .. ! ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြသည်
coronavirus အစီအမံ၏အတိုင်းအတာအရ YHT လေယာဉ်သည်ဇွန်လ ၁ ရက်မှစ၍ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်စတင်မည်။ coronavirus အစီအမံ၏အတိုင်းအတာအရ YHT လေယာဉ်သည်အပြန်အလှန်ပျံသန်းမှု ၁၆ ခုမှဇွန် ၁၆ ရက်မှစတင်မည်ဖြစ်သည်။ Ankara-Istanbul, Istanbul-Ankara, Ankara-Eskisehir, Eskisehir-Ankara, Ankara-Konya, Konya-Ankara, Konya-Istanbul, [ပို ... ]
အခမ်းအနားမတိုင်မီသမ္မတအာဒိုဂန်သည်BaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံတို့တွင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ဒေါက်တာအာဒိုဂန်မှအာဏာပိုင်များထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း Fahrettin Koca သည်အခြားစိတ်ဝင်စားသူများနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ ဂျပန်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် [ပို ... ]
အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပညာရေးအတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
အမျိုးသားပညာရေးဒုတိယ ၀ န်ကြီး Mahmut Özerမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းများ၌တည်ထောင်ထားသော R&D စင်တာများအတွက်ကူးစက်ရောဂါလွန်ကာလအစီအစဉ်များအကြောင်းသတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့သည်။ Özerက "ကျနော်တို့မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် R&D စင်တာ ၂၀ ခန့်ရှိမယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစင်တာတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသည် [ပို ... ]
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး Bekir Pakdemirli ကTurkeyanlıurfaCeylanpınarပြည်နယ်လယ်ယာစိုက်ခင်းမှဟက်တာ ၆၀,၀၀၀ ကိုပြီးစီးစေမည့်တူရကီ၏အကြီးဆုံးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် [ပို ... ]
ယနေ့BaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံသည်သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanနှင့်ဂျပန် ၀ န်ကြီးချုပ် Shinzo Abe တို့ ပူးပေါင်း၍ အပြည့်အ ၀ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်လူနာ ၃၅,၀၀၀ နှင့်အင်္ဂါရပ် ၅၀၀ ကိုနေရာချထားနိုင်သည် [ပို ... ]
၃၉၉ အာဇာနည်၊ စစ်ပြန်နှင့်စစ်ပြန်ဆွေမျိုးများ၏တာဝန်များ
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra ZümrütSelçukသည်အာဇာနည် ၃၉၉ ဦး၊ ၀ န်ကြီးSelçukကပြောကြားသည်မှာ coronavirus အစီအမံ၏အတိုင်းအတာအတွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် notary အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Covid-19 တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် TSE မှစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသို့လမ်းညွှန်
"Covid-19 သန့်ရှင်းမှု၊ ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်" ကို Covid-19 နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများတိုက်ဖျက်ရာတွင်လမ်းညွှန်မည့်တူရကီစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာဌာန (TSE) မှကျွမ်းကျင်သူများကပြင်ဆင်သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် [ပို ... ]
၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ၆၅ နှစ်ကြာခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာထွက်ခွာခွင့်ကိုကန့်သတ်ခံထားရသောအသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက်သိပ္ပံကော်မတီ၏ထောက်ခံချက်နှင့်သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğan၏ညွှန်ကြားချက်များအရမေလ ၂၁ ရက်ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၉ ရက်၊ [ပို ... ]
Izmir တွင်ပြည်နယ်အထွေထွေသန့်ရှင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပြည်နယ် ၃၀ နှင့်မြို့အနှံ့အပြားတွင်မျက်နှာဖုံးများအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်ပြည်နယ်သန့်ရှင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့အမှတ် ၁၅၉၃“ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ [ပို ... ]
LGS မေလဒုတိယနမူနာစာအုပ်ငယ်ကိုထုတ်ဝေသည်။ အမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန Ziya Selçukကအထက်တန်းကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေသောကျောင်းသားများအတွက်မေလ၏ဒုတိယနမူနာမေးခွန်းစာအုပ်ငယ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ခရီးသွားလာခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါသလား။ ပြည်နယ် ၁၅ ခုမှာဘယ်အချိန်မှာခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမလဲ။
CoVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခရီးသွားလာခွင့်တားမြစ်ချက်များဆက်လက်ရှိနေသည်။ မနေ့ကထုတ်ဝြေခင်းအသစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများကပိတ်ပင်ထားမှုများကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်စေလိုပြီး၊ [ပို ... ]
Eid တွင်ညမထွက်ရအမိန့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ဘယ်တားမြစ်ချက်တွေလဲ စျေးကွက်နှင့်မီးဖိုများကိုဖွင့်ပေးမည်လား
Eid al-Fitr အတွက်ရက်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ အားလပ်ရက်အတွင်း၊ ၄ ရက်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ ပွဲတော်အတွင်းကုန်စုံ၊ စျေးကွက်၊ အသားနှင့်မုန့်ဖိုများဖွင့်မလား။ တားမြစ်ချက်ကိုဘယ်ပြည်နယ်များကဖုံးအုပ်ထားသလဲ။ အတွင်းပိုင်း [ပို ... ]
နောက်ဆုံးမိနစ် - သမ္မတ၏အမိန့်အရထုတ်ကုန် ၈၀၀ ကျော်အတွက်နောက်ထပ်အကောက်ခွန်ခွန်ကောက်ခံလိမ့်မည်
တရား ၀ င်သတင်းစာတွင်ထုတ်ဝေသောသမ္မတ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရထုတ်ကုန် ၈၀၀ ကျော်ကိုအကောက်ခွန်အခွန်ထပ်တိုးခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ယန္တရားများတွင်ရိန်းများ၊ သံနှင့်သံမဏိထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စီးပွားရေးအပေါ် coronavirus ဖြစ်ပွားခြင်း [ပို ... ]
အဆိုပါ Admiral Cihat Yaycı၏နှုတ်ထွက်စာအသနားခံထွက်လာပြီ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအားအမိန့်ပေးခံရခြင်းအပြင်ဗိုလ်မှူးစီဟက်ယာယီစီသည် (သူသည်ကျွန်ုပ်အားထောက်ပံ့မှုကင်းမဲ့ကြောင်းနှင့်သင်္ဘောသားများကိုနှိမ်နင်းရန်ကြံစည်ထားခြင်းကြောင့်) [ပို ... ]
ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cihat Yaycı၏နှုတ်ထွက်မှုကိုလက်ခံခဲ့သည်
တူရကီအရှေ့ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်၏ဗိသုကာနှင့်လစ်ဗျားမဟာဗျူဟာဂျီဟတ်ယာယီစီ၏ရေတပ် ဦး စီးချုပ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်လူသိများသောလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးနောက် ၀ န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်များအရအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန [ပို ... ]
လူငယ်များကသတ်မှတ်ထားသောအလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေသည် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်
အသက် ၁၅ မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်များ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်တူရကီရှိအစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ အထက်တန်းကျောင်းအသားတင်ကျောင်းအပ်နှုန်းသည် ၈၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော်လည်းလူငယ် ၂၅၀၀၀ မှာစာမတတ်ကြပါ။ လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေ ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ [ပို ... ]